Mametraha GPS Tracker ny miditra sarintany ao amin'ny Internet – Taylor Lopes ツ Blog
Mametraha GPS Tracker ny miditra sarintany ao amin'ny Internet
Ary mila manara-maso ny fiara amin'ny alalan'ny Internet, manaraka ny lalana, tena amin'ny fotoana sy ny toerana haingana? Na mety ho fantatrao izay milamina kokoa ny olona iray ao amin'ny fianakavianao? Jereo ity avy!
Amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny be tsy fandriampahalemana sy ny ara-bola fahoriana, manao ny zava-drehetra mba tsy fatiantoka. Fa ratsy noho ny manana ny fiara nangalarina, Izany dia ny hanana fianakaviana azom-pahoriana ity fiara, Andriamanitra no mahalala izay. Miaraka amin' ny Tracker Tsy ho afaka ny hanakana izany tsy hitranga ianao., fa, fara fahakeliny, azonao atao ny handinika sy mandefa fanampiana ny mahafantatra ny tena toerana misy ny fiara.
Mazava ho azy fa io fahanginana sandoka manana vidiny. Ny Tracker ianao hividy ny R $ 150,00 eo amin' ny antonontonony, ny fikojakojana ny sôkôla telephony amin' ny Tahirin-Kevitra Fonosan' entana dia tonga manodidina an' i R $ 10,00 isam-bolana, mampiasa ny rafitra M2M (Machine ny Machine). ary avy eo, mendrika izany na tsia? Tsara, ny rehetra izay mahalala ny callus milina fanontam-pirinty, inona no mendrika na tsy ho voaro.. Ary nony hoy “zareo ka tsy mampiasa mametraka ny hidin-trano taorian'ny varavarana tapaka”. Nanapa-kevitra ny hanandrana ;)
Misy Trackers fampiasana ny tena manokana sy ny fampiasam-pamokarana.. Araka ny raharaha, Nividy TK103A (Coban), fa ny hevitra dia ny nataony tao an-fiara mba hanara-maso lalana mahazatra sasany. Kanefa ny olana dia ny hoe rehefa mahazo GPS ianao. Tracker, tsy misy olona te-ho fandefasana didiny ary ny fandraisana ny Flag SMS (lahatsoratra). Izany no mankaleo! Te-hahita “ny zavatra” tsy misy sari-tany, real-time. Koa tonga!
Nosedraina ny rafitra telo en ligne ho an' ny trackers. Niasa ho amin'ny fahafaham-po avokoa izy rehetra.:
1) GPS-Tena (Ny dia – Afaka).
2) TrackerHome (“Solosaina foibe 1”: IP 202.104.150.75 – Afaka).
3) CorvusGPS (Aloavy – $0.02/Andro)
Nisy roa Dingana tokantrano izay hofaritana etsy ambany:
1) Tokantrano ao Tracker (Ao anatin' ny toe-javatra, ny TK103)
2) Tranonkala/Tranonkala tokantrano izay misarika sain' fitantarana ny fandrindrana ny sarintany..
Haneho ny tokantrano amin' ny alalan' ny fampiasana GPS-Trace aho., TrackerHome sy CorvusGPS, Dia niakatra ho any aminao mba hifidy, saingy tena fahazoan-dalana anareo aho hampiasa ny M2M Sôkôla sy ny GPS.-.
Alohan'ny manomboka, hevero fa ny Tracker (TK103A fitaovana) efa tanteraka fandidiana, amin'ny teny hafa, manaiky didy nalefa tamin'ny alalan'ny SMS avy amin'ny mpitantana ny sela, Inona avy ireo ianao =)
Raha toa ka tsy nanao izany, hojerentsika ity TK103 boky tamin'ny teny portogey. Baolina fotsiny ianao mba hanampy ny laharan' ny finday izay authorizing ny Tracker handray sy handefa hafatra.
Mba hahatonga ny zava-drehetra ny asa, ho azo antoka fa ny Chip hafatra manana drafitra (SMS) ary ny tahirin-kevitra (Internet) afaka. Afaka mitsapa izany ianao amin' ny alalan' ny fametrahana ny Sôkôla (amin' ny Tracker) eo amin' ny finday., fandraisana sms sy fanamoriana-pahaizana alohan' ny fametrahana izany ao amin' ny Tracker hanomboka ny toe-javatra.
Rehefa mangataka teknisiana misahana mba asio ny Tracker ao anaty fiara., ataovy izay hametraka ny GPS antenna sy ny GSM antenna izay tonga ao amin' ny tracker, any amin'ny toerana tsara ao anaty fiara..
Tokony ho ao anatin' ny toerana paikady izany mba tsy hiteraka fitsabahana sy hihena ny mariky ny zanabolana. (Gps) ary telephony (Gsm). Raha tsy izany, ny fomba fanaraha dia tsininy amin' ny alalan' ny hoe tsy afaka mahazo ilay tracker. (Gps) ary mandefa (Gsm) ny fandrindrana ny tahirin-kevitra ara-dalàna sy ny visualization eo amin' ilay sarintany dia ho voatefy. (unreliable).
Ao amin' Youtube misy horonan-tsary sasantsasany izay manazava ny toerana tsara indrindra antenna.
Dingana 1 – Tokantrano ao Tracker
– Io toe-javatra no Tracker TK103A, na dia mety miasa amin'ny hafa toy izany koa modely.
– To hanafatra fampisehoana, dia hampiasa ny toerana misy anao tenimiafina izay 123456, fa afaka manova izany raha tianao (Jereo ny voalaza etsy ambony boky fampianarana).
– rehefa miditra, mampiasa ny sora-baventy / lowercase marina araka ny hita ao amin'ny didy tsirairay.
– Apetraho eo amin'ny toerana misokatra ny fiaranao. (tsy ao anatin' ny garazy)
Hanao lisitra ny didy rehetra aho ary, ny, hazavao izy ireo. Noho izany dia ity misy anambiatra feno ny TK103 tracker amin' ny fampiasana ny Vivo ny M2M Sôkôla sy ny Sarintany GPS. Alefaso amin' ny sôkôla ny laharana sôkôla ity hafatra SMS manaraka ity.:
admin123456 5561983030102 //nomena lalana ny telefaonina handefa didy.. Miverina: "admin ok!"
password123456 112233 //Hifanakalo ny tenimiafina ao amin'ny 123456 ho an' ny 112233. Misafidiana tenimiafina iray miaraka amin' 6 Digits
Begin112233 //Miverina: "begin ok!"
GPRS112233 //Miverina: "GPRS OK!"
Mahay APN112233.M2m.Velona.Miaraka amin'.br up112233 miaina //Miverina: "user,tenimiafina tsy maninona!"
admin123456 5561983030102 //nomena lalana ny telefaonina handefa didy.. Miverina: "admin ok!" password123456 112233 //Hifanakalo ny tenimiafina ao amin'ny 123456 ho an' ny 112233. Misafidiana tenimiafina iray miaraka amin' 6 dígitos begin112233 //Retorna: "begin ok!" GPRS112233//Miverina: "GPRS OK!" adminip112233 193.193.165.166 20558 APN112233 smart.m2m.vivo.com.br up112233 vivo vivo //Retorna: "user,tenimiafina tsy maninona!" fix030 s * * * n112233
Tahaka ny nolazaiko, Etsy ambony dia nampiasa ny toe-javatra GPS aho. + Iaino ny M2M. Etsy ambany, Hahazo tsikombakomba hafa vonona aho., Raha misafidy sarintany iray hafa solosaina foibe sy tambazotram iray hafa ianao. (Sôkôla). Manana ohatra enina isika, misafidy iray ihany! Alamino na ampiasao ny GPS-Dalana, TrackerHome na CorvusGPS ary, avy amin' ny finday., alefaso amin' ny sôkôla ny laharana sôkôla ity hafatra SMS manaraka ity.:
1)GPS-Tena + Iaino ny M2M
Mahay APN123456.M2m.Velona.Miaraka amin'.br up123456 miaina fix030 s***n123456
4)GPS-Tena + I tim
APN123456 Tim.br up123456 i tim i tim fix030 s***n123456
2)TrackerHome + Iaino ny M2M
5)TrackerHome + I tim
3) CorvusGPS + Iaino ny M2M
6)CorvusGPS + I tim
Famaritana ny didy
begin123456 Resets ny toe-javatra rehetra orinasa tahirin
GPRS123456 Tracker ny fomba GPRS (ny toerana misy anao dia SMS). Izany no mahatonga ny hafatra mba ho nalefa tany amin'ny lohamilina ao amin'ny Internet fa tsy hafatra an-tsoratra (SMS)
APN123456 tim.br Configures Ny APN ho an' ny GPRS. Acess Point Name (APN) Tsy mamela anao hifandray amin'ny tambazotra ampiasainy. Izany toe-javatra izany dia miankina amin' ny Sôkôla izay ampiasainao.. Azonao atao ny mijery ity lisitra ity amin' ny APN rehetra: https://www.followmee.com/APNList.aspx
adminip123456 202.104.150.75 9000 Configures ny ZAP sy ny port ny sarintany mpanome. Eto ianao dia tokony hisafidy ny hampiasa ny GPS-Trace, TrackerHome na CorvusGPS, satria samy manana ny ZAP manokana/Port.
up123456 ekipa ekipa Configures gprs ny mpampiasa sy ny tenimiafina APN
fix030 S *** n123456 Mametraka ny fotoana hatetika fa ny Tracker dia hanao tatitra ny mpandrindra. amin'ity tranga ity, tsirairay 30 segondra.
Dingana 2 – Fametrahana ny Maps Site
Mba hahazoana ny IMEI avy amin' ny tracker (TK103), alefaso amin' ny sôkôla ny laharana sôkôla ity hafatra SMS manaraka ity.:
imei123456 //123456 no tenimiafina tahirin., na hanova izany ho an' ny tenimiafina misy anao.. Miverina: ny laharana IMEI
Raha nisafidy ny hampiasa ny GPS ianao., manao izao manaraka izao:
1. fitsidihana http://gps-trace.com/, ary safidy “Mari-pamantarana” ary ao amin' “Mamorona tantara ho an' ny malalaka” hamorona kaonty.
2. Midira ao amin' ny http://orange.gps-trace.com/ hanombohana ny anambiatra.
3. Tsindrio ny bokotra “Activate” ary fenoy tany an-tsaha:
– Name: Plate na modely ny fiara,
– Karazana fitaovana: GPS103-B,
– ID ny tokan-tena: ny IMEI laharana,
– Laharan'ny telefaonina: sôkôla ny laharana ao anatin' ny tracker (Ex: +556198761234),
– Fitaovana mahazo tenimiafina: Tracker ny tenimiafina
4. Rehefa afa-ka hanidy ny teo aloha efijery, Hiseho eo amin' ny ilany ankavanana ny Tracker.. Raha ny zava-drehetra niasa avy, Hihodina maitso ny kisary iray., maneho eo amin'ny sarintany ny toerana ny Tracker.
Fanadihadiana: in ny adiko, Ny kisary dia mazoto fotsiny ihany ary ny fandrika ihany no niseho teo amin'ilay sarintany taorian'ny minitra vitsy., Rehefa avy nandeha niaraka tamin'ilay fiara aho..
Raha mbola manana fanontaniana ianao., jereo ny horonantsary Clêbson i Lima “AHOANA NO FOMBA HANAOVANA NY FISORATANA ANARANA TRACKER TK103 E 303 EO AMIN' NY TRANONKALAN' NY HABAKABAKA”:
Misy, Mbola, application finday azo alaina ao amin' Google Milalao f Ios.
Raha toa ka nisafidy ny hampiasa ny TrackerHome, manao izao manaraka izao:
1. fitsidihana http://www.gpstrackerxy.com/, ary hifantina Server1 ary tsindrio “Register” hamorona kaonty (Get ny IMEI fandefasana ny SMS ny Tracker ny didy “imei123456”).
2. Miditra ary tsindrio ny sakafo “System Settings> Terminal Management” hanampy ny Tracker.
3. Tsindrio ny bokotra “Add” ary fenoy tany an-tsaha:
– IMEI No: ny IMEI laharana,
– Name: Plate na modely ny fiara, f
– Model: Choose Track safidy
4. Rehefa afa-ka hanidy ny teo aloha efijery, Ny Tracker hiseho eo amin'ny lafiny ankavia. Raha ny zava-drehetra niasa avy, baolina iray matoanteny mampody maitso, maneho eo amin'ny sarintany ny toerana ny Tracker.
Raha toa ka nisafidy ny hampiasa ny CorvusGPS, manao izao manaraka izao:
1. fitsidihana https://corvusgps.com/ ary manokatra kaonty (Mamorona Free kaonty).
2. Miditra ary tsindrio eo amin'ny “GPS Mpikaroka”.
3. Add ny Tracker (Tracker) manindry ny “Add new GPS Tracker”:
– Fanteno ny fitaovana, in ny adiko, ny TK103
– Mifidiana anarana ho an'ny fitaovana, dia mety ho ny manao na fahazoan-dàlana takela
– Report IMEI maro ny Tracker
(Get ny IMEI fandefasana ny SMS ny Tracker ny didy “imei123456”)
4. Rehefa avy fampidirana ny Tracker, tsindrio eo amin'ny “Asehoy amin'ny sari-tany” ary vonona, Izany sarintany mampiseho ny toerana sy ny Tracker (fiara).
Ny tranonkala ofisialy ny CorvusGPS hitanao ny ny mpampiasa boky fampianarana for TK102 sy TK103 GPS Tracker.
Samy tranonkala manolotra ihany koa ny toe-javatra mahaliana hafa, isan-karazany ao anatin'izany ny sarintany.
Zava-dehibe: Tena ilaina izany, rehefa avy nametraka, arofanina ny vitsivitsy 5 ny 15 minitra miaraka amin' ilay fiara mba hanamorana ny fanamarinana ny tracker amin' ny alalan' ny sarintany solosaina foibe (tahirin-kevitra/fampitana).
mihaino / Monitor
Afaka mandao ny Tracker eny an-dalana “Monitor” mba hihaino ny zavatra rehetra manodidina.
Alefaso SMS didy eto ambany ary miandry izy hamaly “Ok Monitor”. rehefa afaka izany,, manao antso ho amin'ny Tracker ny nomeraon-telefaonina ary afaka mihaino ny tontolo iainana.
nefa, Raha mampiasa ny tena-ny rafitra toy ny WEB TrackerHome na CorvusGPS, manao:
Io endri-javatra Mahaliana, fa ianao nampahafantarina raha ny fiara amin'ny toerana :)
Enable hetsika fanairana
Alefaso SMS didy eto ambany ary miandry izy hamaly “Move Ok”. Raha misy hetsika, ianao mandray ny SMS “Move” ny Flag.
Disable hetsika fanairana
M2M telephony sôkôla – Machine ny Machine
Afaka mampiasa sôkôla ny finday ianao miaraka amin' ny antontan-taratasy misy ny tahirin-kevitra., nefa tsy manoro hevitra aho., Satria lafo loatra izany., na ao amin' ny prepaid na ao amin' ny drafitra isam-bolana.. Ao amin' ny I TIM, ohatra, ny sôkôla dia hisy sarany eo amin' ny antonontonony R. 35,00.
Raha te-hitandrina ny mora Chip ao amin'ny Tracker, M2M Ny safidy tsara indrindra isalasalana fa. Amin' ity modality ity (M2M) Ianao dia handany ny antonontonony fotsiny ihany. 10,00. Araka ny M2M matetika dia tsy tonga amin' ny SMS fonosan' entana (Ny tahirin-kevitra ihany), Tsara ny manao ny toe-javatra tracker voalohany amin' ny Sôkôla izay SMS, Avy eo dia swap fotsiny. Nizaha toetra aho, ary niasa tsara.
Ao an-Tsena Malalaka izay hitanao Chip Vivo Unlimited M2M To Tracker (Isam-bolana drafitra) a R $ 10,00.
Total isan'ny Hits: 179087
5 Jona 2016 Taylor Lopes	apn, gprs, GPS, Tracker, tk103, tk103a, Tracker
38 hevitra “Mametraha GPS Tracker ny miditra sarintany ao amin'ny Internet”
Daniel Moreira Gomes nanao hoe::
Te-hampiasa ny GPS Tracker V.2.0.0.2 fandaharana ny mitantana ny TK103.
Alefaso Ip ny fifandraisana, redireciono ny Porta 9000, tsara ny zava-drehetra.
Fa rehefa manampy ny mpikaroka hafatra manaraka ity miseho “IMEI invalidation”.
Avy efa misaotra anao.
18 Oktobra 2016 ny 15:46
Reinaldo Martins nanao hoe::
Tiako ny fanampianao momba Tracker GPS, ary noho izany dia soratako aminao, Nanao fahadisoana aho, ary namafa ny IMEI, izay teny amin'ireo sehatra rehefa nampianatra, fa ankehitriny dia miezaka ny reactivate ny lampihazo, ary milaza fa misy amin'io tantara io fa tsy maintsy hamafa ny lohamilina, manampy ahy. misaotra anao
2 Novambra 2016 ny 13:00
Josy nanao hoe::
Ahoana no fomba hamafa ny fiara izay tsy mampiasa bebe kokoa ?
19 Desambra 2016 ny 9:14
Fernando nanao hoe::
Friend nanao araka izay nampiseho fa hiditra ny toerana ary ny fiara dia tsy eo amin'ny sarintany ihany in manga…ahoana? Izany dia voatery
15 Jolay 2017 ny 14:24
Reginaldo nanao hoe::
Ny fiara dia tsy ny ranomasina, rehefa izany dia tokony hatao amin'ny fotoana izay no misy ny GPS.
Tena izao no olana fa tsy nisy nanazava na tsy fantatrao, angamba ihany ny Sinoa izay namorona ity tranokala ity mahalala.
Nanana olana toy izany koa, horonan-tsary sasany mampianatra ny fomba fisoratana anarana ny GPS fa amin'ny fampiharana na inona na inona mitranga dia manome toerana ho azonareo tsara fa tsy ampy miasa, ary koa ny manana informaçãos vitsy, fa tsy manana manampy tutorial dia tsy misy asa na dia niampanga Zavaboary Ratsy GPS.É.
4 Aogositra 2017 ny 22:33
Roberto Martinez nanao hoe::
Manana olana amin'ny imei, Tsy hanaiky izany, ary milaza fa tsy mety ary efa Cale amin'ny 3 imeis bebe tsy nisintona, Dia afaka manampy mba hahalala an'izay hitranga amin'ny olana.
28 Aogositra 2017 ny 16:52
I Antonio Eo nanao hoe::
saber mande firenena mikambana mensaje para el rastreador imei123456 para el imei correcto y luego y sólo registrar correcto
28 Septambra 2017 ny 0:21
Manu nanao hoe::
Nanaraka ny toromarika rehetra aho. Mandidy ny sms dia miasa tsara. Kanefa manana olana amin' ny GPRS fanaraha-maso. Ao amin' ny tranonkala/application hitako dia tsy mandeha ny fiara.. hoy izany eo amin' ny fijerena ny saranga dia GPRS amin' ny. manampy olona iray
19 Septambra 2017 ny 11:58
Tsy maintsy mandady ny fampiharana satria tsy fatratra tokoa. hanao izany amin' ny alalan' ny tranonkalan' ny mpanamboatra sy mety kokoa sy mba handefa ny toe-javatra misy marina eo anoloan' ny fampiasana ity tranonkala ity.
28 Septambra 2017 ny 0:10
Robson nanao hoe::
Parabens pela explicação… ry meu foi certinho….
22 Septambra 2017 ny 11:16
Javier Carrillo nanao hoe::
Tengo el mismo problema, pero bien mavitrika rehetra tsy atsimo atsinanana muestra teny el sarintany, GPRS HIALA, Aún cuando el hafatra mba activarlo ity correcto (MSJ: Namaly GPRS123456 y GPRS OK!).
Manana olana, Tsara ny zava-drehetra saingy tsy aseho ao anatin' ilay sarintany izany., GPRS HIALA, Na dia marina aza ny SMS (Msg: GPRS123456, ary namaly GPRS eny!)
Ahoana no ahafahako mamaha izany.?
29 Septambra 2017 ny 13:10
I Nancy nanao hoe::
Manana olana marina izany…
3 Oktobra 2017 ny 0:14
Welvisley Ny Fahaterahana nanao hoe::
Manahoana, Indraindray dia marika eo amin' ny toerana tsy mbola nisy aho.
13 Novambra 2017 ny 12:47
inineufields nanao hoe::
Hello , Manana olana amin' ny fampifandraisana ny tk tracker aho. 103, Nanao ny dingana tsikelikely. , Nanamarina ny telefaonina aho. , Fa tsy misy na inona na inona tsy mifandray amin' ilay tranonkala. , efa ny didy amin' ny sms blz, ta ny tsara rehetra, manontany tena ny asa.
10 febroary. 2018 ny 21:20
ISAILSON nanao hoe::
Noho ny Resaka.
Mametraka ny zava-drehetra aho amin' ny fampiasana ny specs ary miasa tanteraka izany..
15 febroary. 2018 ny 9:54
Luciano Marquetti nanao hoe::
Manahoana, Miezaka ny misoratra anarana amin' ny Tracker aho, fa izany dia milaza fa ny IMEI dia tsy manan-kery, Azoko amin' ny SMS ny isa ary ny laharan' dia tonga ao amin' ilay boaty..
Mila mamela ny zavatra ?
31 Martsa 2018 ny 16:11
Mcdonald izay nisy azy nanao hoe::
Te hahafantatra IP Tracker isan-tokantrano dia ny mitovy tk303. misaotra betsaka
11 Aprily 2018 ny 9:55
Midiana teo Ribeiro nanao hoe::
Manahoana, Ny ratreador tsy mamaly fa tsy miaraka amin' ny zatovo avy amin' ny sms, Tsy afaka ny vonoy sy ny tsy areheto fa na inona na inona, Ahoana no fomba ahazoako hamaly azy, Nahoana no tsy sms na inona na inona.
26 Aprily 2018 ny 9:42
Ezekiela nanao hoe::
sertamente ny tambazotram voasakana ny fandefasana sms avy any amin' ny tracker sôkôla
18 Aprily 2019 ny 15:08
Val Max nanao hoe::
Te-hametraka ilay namana 30 trackers amin' ny alalan' ny fisoratana anarana amin' ny alalan' ny fisoratana anarana. Ahoana no ahafahako manao? Manana kaonty ve ianao.?
24 Jolay 2018 ny 15:31
I Michael nanao hoe::
Niezaka aho ny amboarinao ny tracker ZAP teo amin' ny tranonkala ary mampahalala fa efa misy tenimiafina anarana. Ahoana no fomba hiezahako miverina.??
24 Aogositra 2018 ny 16:20
NANCY VALLADARES nanao hoe::
BUEN DIA TENGO PAK MI TRACKER TRACKER AN-TRANO ESTABA MIASA ARAKA NY TOKONY HO IZY RAHA POIZINA TENY TENY PERO SOLO AHY AGARRO UNIDAD LAS OTRAS YA TSY ENCIENDEN SE QUEDAN EN GRIS PORQUE ?
Y SI TIEN FANDANJANA
12 Septambra 2018 ny 10:52
Junio Moreira nanao hoe::
Tena tsara ny fanazavanao! Nataoko teto izany ary niasa daholo izany.. misaotra anao
11 Desambra 2018 ny 0:45
Mario chavez nanao hoe::
Salama tsara mandry ahy afaka manampy fomba amboarinao ny gps tracker hatramin' ny aho tany mexique sy ny toerana misy mandefa izany ahy amin' ny Sinoa rehefa manao anareo ho an' izany mem ny ao amin' ny teny Espaniôla
4 Janoary 2019 ny 1:23
i antonio leandro ny mpanjaka nanao hoe::
rehefa hisaorana na ajanony, ry carro volta Ligy.
ny fisaorana stop123456 na ny kamiao.,
? 123456 rohy mankany amin' ny kamiao..
29 Janoary 2019 ny 22:13
Summing ny 123456
18 Aprily 2019 ny 15:06
DENIS OFA nanao hoe::
Manahoana, IZAHO DIA TSY AFAKA NY HISORATRA ANARANA 5 TRACKER AMIN' NY ORGAGE, HAINAO VE HOE KARAZANA FITAOVANA AMPIASAINA, NY Tracker sy ny TK 103-B, Misaotra anao
26 febroary. 2019 ny 15:53
Taylor Lopes nanao hoe::
Hello, dia TK103 ahy ary tsikariny Orange toy ny GPS103-B, araka ny voalaza ao amin' ilay Vongambato. Eto no miasa, anisan' izany ny hampiasa ny Application amin' ny telefaonina (MALALAKA). Hoy ny!
5 Martsa 2019 ny 18:56
I Ana Luce nanao hoe::
Tafandria mandry, Tamin' ny fomba fanamboarana rehetra rehefa nanazava…. Izany no rehetra miasa tsara… nefa….
Isan' andro , ao anatin' ny vanim-potoan' ny 21:00 ny 00:00, ny fiara dia tsy mandeha eo amin' ny toerana…. aorian' izany fotoana izany dia miverina sy mihazakazaka araka ny tokony ho izy.…. Fantatro fa tsara ny tracker., satria mamaly izany amin' ny alalan' ny SMS.
Nisy olona nanana izany olana izany ? mahafantatra ny fomba hamahana ?
12 Martsa 2019 ny 20:37
Admilson Nahmias nanao hoe::
Nanana olana toy izany aho ary tsy nahita na inona na inona tao amin' ny Internet., ambara-teknisiana misahana ahy, handefa fotsiny ity SMS manaraka ity ho an' ny tracker:
Fotoana zone123456 0
Fahatsiarovana fa ny isan' ny 1 ny 6 no tenimiafina tahirin., raha toa ka niova ianao., Apetraho amin'ny tenimiafina ny tenimiafinao.
26 mey 2019 ny 21:26
Gladys nanao hoe::
ya di de alta mi equipo en tracker an-trano pero tsy deja deja detrar desde la pc kodiakely ny si soy dueño de la pagina y tsy puedo seguir la unidad desde ahi
5 Aprily 2019 ny 21:30
wilson ferreira nanao hoe::
GPS 303 GSM GPRS tracker 303g asa isan' andro raha tsy 21 ora maro taty aoriana dia ay izany rehefa avy misasak' alina ny zap. 63 9*******8
18 Jona 2019 ny 15:55
Santiago nanao hoe::
Buenos andro….tengo date duda. satria mahita solosaina foibe 1 teny TrackerHome….ny hoe debe la dia fanteno avy amin' io solosaina foibe io.….Gracias
4 Septambra 2019 ny 10:12
Hello, afaka manandrana solosaina foibe iray hafa ianao.. Hoy aho server1, satria ny solosaina foibe izany no nataoko tamin' ilay fitsapam-pahaizana ary niasa. Fihino ny
8 Septambra 2019 ny 17:24
I holy nanao hoe::
Buenos días me aparece pak mi gps teny, océano todo azul tsy funciona teny tracker por por alguien que sepa la solución. Todos los sms an' i dan bien pero teny la plataforma tsy funciona
9 Janoary 2020 ny 9:24
Luis A. Tinoco nanao hoe::
Ayuda Necesitus, ya que deseo amboarinao esory lavitra y luego ny famerenana lavitra, fa ao amin' ny ranomasina SMS ny salantsalany, izany ranomasina izany amin' ny alalan' ny tranonkala.
13 Janoary 2020 ny 20:18
Goiânia Fanarenana nanao hoe::
Tsara daholo ny votoatiny. Misaotra anao noho ny fanomezana fampahalalana betsaka.
Amin'izany fomba izany ho an'ny olombelona. tiako.
28 Martsa 2020 ny 4:44
Rajitha Arangala nanao hoe::
Rehefa miditra ny laharan' ny IMEI aho ho an' ny fisoratana anarana (http://www.gpstrackerxy.com/Login.aspx?Server=2) . Hanome hafatra diso ny IMEI izay efa ampiasaina.. Ny zavatra tokony hataoko dia ny ho tonga amin'ity olana ity..
18 Septambra 2020 ny 22:08
Bokotra hoe CTRL + D sy CTRL + V eo amin' ny Varavarankely sy ny Linux VM ao anaty Baoritra Nolalaoviko Fomba tahadika/apetaho eo amin' ny Varavarankely sy virtualized Ordinateur Debian? Ny vahaolana miharihary fa ho napetaky ny "Ho an' ny Vahiny fanampiny" Oracle VM VirtualBox, kanefa rehefa mamorona ny fahadisoana "Tsy nahomby ny hametraka vboxadd ny asa fanompoana"? Introdução Antes de ma...
Fampahavitrihana Kaspersky ny fanalahidy avy any amin' ny firenena hafa (Faritra) Izany dia vahaolana azo atao mba hiasa manodidina ny olana "Ny mari-pamantarana ny asa dia nahitana ho an' ity faritra ity.", satria misy ny famerana fa ny fanalahidy sasany dia tsy azo ampiasaina amin' ny faritra sasantsasany. (Firenena). Problema Quem fe...
Asio mPDF tsy misy Mpamorona ny solosaina foibe – Ireo tatitra PDF amin' ny PHP mPDF mitondra avy amin' ny CSS/HTML amin' ny fianarana ambany kokoa curve. Ny hevitra eto dia ny hanao asa mPDF raha tsy misy ny asio ny mpamorona tiona eo amin' ny solosaina foibe. Ho ampiasaina eo an-toerana ny mpamorona tiona ary nalefa taty aoriana any amin' ny solosaina foibe. TSARA: Raha toa ianao ka..
Copyright © 2021 taylorlopes.com satria Oct 2012, 2.965.958 fidirana